Think Different » စဉ်းစား စရာလေးများ (၁)…	15
water-melon says: သိတော့ဘူး သူများ ဦးနှောက်က သိပ်မမှီလို့
kotun winlatt says: လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲကြတာ ဒီမိုကရေစီကျတယ်ပဲပြောရမလားးး…။
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ရက်ရာဇာမို့ ပြဿဒါးမို့ ဘယ်နေ့ ၊ဘယ်ခါရွေးမနေတာ အကောင်းဆုံးပါ။အားလုံးသောနေ့ သည်
yoeyar may says: ဟဲဟဲတိုက်ဆိုင်သွားတာနေမှာပါ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရက်ရွေးရတယ်လို့
Harumoto says: ဆေးဆရာမို့လို့ပေါ့..မျက်စိ မကောင်းဘူးပြောတာ
sandawchain says: ဟုတ်ပါတယ် စပ်ဆက်ပြီးတွေးမယ်ဆိုရင် မှန်နေတာတွေ အများကြီးပဲ သို့ ပေမယ့်လည်း မှန်တဲ့အရာတိုင်းဟာ ဘ၀တိုးတက်ဖို့ အတွက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ ခလုတ်တိုက်နေတာတွေဟာလည်း ၂ဖက်အမြင်မရှင်သန်မရင့်ကျက်သေးလို့ ပါ…
etone says: ကို အောက်အော့ဖ်ရေ …
ဆေးဆရာ သဘောအရ အကြောင်းကိုအရင်ကုလျှင် .. နောက်အလားတူ ကိစ္စတွေ ထပ်မဖြစ်တော့ပေမယ့်ရထားတဲ့ ဒဏ်ရာလေးက .. တဆစ်ဆစ်နာလို့ … စိတ်ခုနေရမယ့်အတူတူ … ခြေမကွဲတာ အရင်ကု ပြီးမှ .. မျက်စိပါဆက်ကု … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 510
ahnyartamar says: Hinn…..should be thanks carefully about that.
rocker tun says: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖတ်သွားပါတယ်မှတ်သွားပါတယ်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါဦးမယ်။
yan shin says: ၁၃ ဂဏန်း အိမ် ခြံ မြေ ကား ၀ယ်ရင် လွယ်ပြီး ရောင်းရင် ခက်တာ ဘာကြောင့်လဲ
kai says: ခရစ်ယန်အယူအဆလို့ ထင်မိပါတယ်..။
တချို့မြန်မာတွေကတော့..(ဘာမှန်းမသိ) ကော်ပီကက်လုပ်ပုံရပါကြောင်း.. Why is 13 an unlucky number?
etone says: အဲ့ဒီ 13 ဂဏန်းပေါ့ .. ကျွန်မနဲ့ အတော် ကံစပ်တာ …. ။
ဖဲရိုက်လို့ 13ဆိုလျှင်အရမ်းသဘောကျတယ် … လုံးဝ ကုလားမတက်ဘူးတော့ … ။ ကျောင်းတက်တုန်းကပါ … ကားစီးရတာဝေးတော့ တလမ်းလုံးဆော့သွားကြတာ …… ဟီး သူများတွေက 13ကို အထူး တလည်ကြောက်ကြပေမယ့် … ကျွန်မတော့ … လုံးဝ .. လုံးဝ မကြောက်ပါ ။ အယူလည်း မသီးပါ .. ဂဏန်းကို .. ဂဏန်းလို့သာ မှတ်ပါတယ် .. 13 ပဲဖြစ်ဖြစ် ..4ပဲဖြစ်ဖြစ် … နိုးပလုံပလုံ …. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1618
Moe Z says: ၁၃ရက် ၄ ဂဏန်းကတော့ မိုးစက်အတွက် Lucky No. ပဲ ..
Was this answer helpful?LikeDislike 14458
kai says: တခါတလေက.. အယူသည်းတာကောင်းပါတယ်..။
၉ ဆိုပါတော့.. ဂဏန်းကြီးမို့ .. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေး မွန်မွန် says: ကျန်တာတော့ မပြောတတ်ဘူး..တနင်္လာနှစ်ခါပြန် ဆိုတာတော့ မှန်တယ်တော့… နှစ်ခါပြန်လုပ်ရတဲ့နေ့ကို ပြန်သတိထားကြည့်လိုက်တိုင်း တနင်္လာနေ့ ဖြစ်နေတာချည်းပဲ… မယုံချင်ဘဲ ယုံထားရတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.